बथान प्रतिरक्षा के हो?
हर्ड इम्युनिटी, जसलाई सामुदायिक प्रतिरक्षा पनि भनिन्छ, एउटा यस्तो अवस्था हो जसमा समुदायको ठूलो भाग (बथान) रोगप्रति प्रतिरोधात्मक हुन्छ, जसले गर्दा रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिने सम्भावना हुँदैन। नतिजाको रूपमा, सम्पूर्ण समुदाय सुरक्षित हुन्छ, न केवल जो प्रतिरक्षा छन्। संक्रामक रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता खोप र/वा पहिलेको रोगबाट आउन सक्छ।
के मैले पूर्ण खोप लगाएपछि पनि मास्क लगाउन आवश्यक छ?
27 अप्रिल, 2021 मा, CDC ले पूर्ण रूपमा खोप लगाइएका मानिसहरूका लागि अद्यावधिक मार्गनिर्देशन सिद्धान्तहरू जारी गर्‍यो। मानिसहरूले Moderna वा Pfizer खोपको दोस्रो डोज पाएको २ हप्तापछि वा एक-डोज J&J खोप पाएको २ हप्तापछि पूर्ण रूपमा खोप लगाएको मानिन्छ।
अङ्ग्रेजीमा भर्खरको दिशानिर्देशहरू हेर्न तलको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्:
स्पेनिश मा नवीनतम दिशानिर्देशहरू हेर्न तलको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्:
खोप भनेको औषधि हो। यसले तपाईंलाई बिरामी हुनबाट जोगाउँछ। उदाहरणका लागि, फ्लू शट एक खोप हो। यसले तपाईंलाई फ्लूबाट जोगाउँछ। खोप लिनु तपाईंको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो र तपाईंलाई बिरामी हुनबाट जोगाउन सक्छ।
धेरै कोभिड-१९ भ्याक्सिनहरू बनिरहेका छन्। धेरै जसो तपाईंलाई २ शटहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ। तपाईंले पहिलो शट पाएको3देखि4हप्ता पछि दोस्रो शट पाउनुहुनेछ। दोस्रो शट एक बूस्टर शट जस्तै छ। खोपले काम गर्नको लागि तपाईंले दुवै शटहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ। सरकारले सबै खोपहरू सकेसम्म सुरक्षित छन् भनी सुनिश्चित गर्दछ। खोप तपाईलाई कुनै शुल्कमा उपलब्ध छ। बीमासँग कुनै शुल्क लाग्दैन र बीमा नगरिएको खण्डमा लागत कभर गर्नका लागि कार्यक्रमहरू उपलब्ध छन्।
तपाईंले COVID-19 खोप लिँदा के हुन सक्छ भन्ने बारे आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्। त्यहाँ केही साइड इफेक्टहरू छन्। उदाहरणका लागि, तपाईंले शट लिनुभएको ठाउँमा तपाईंको हात दुखेको हुन सक्छ (जस्तै तपाईंले फ्लूको शट लिँदा), र तपाईंले शट खाइसकेपछि तपाईंलाई थकान वा ज्वरो आउन सक्छ।
COVID-19 खोप कसले पाउनेछ?
प्रारम्भिक चरणहरूमा, धेरै जोखिममा रहेकाहरूले उनीहरूले चाहेको खण्डमा खोप लिन सक्षम हुनेछन्। यसमा चिकित्साकर्मीहरू, COVID-19 बिरामीहरूको हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरू, र समूह सेटिङहरूमा बस्ने वा काम गर्ने मानिसहरू समावेश हुनेछन्।
अहिलेको लागि, खोप बालबालिकाका लागि होइन। युवा र स्वस्थ वयस्कहरूले खोप प्राप्त गर्न वसन्त सम्म कुर्नु पर्ने हुन सक्छ।
एक पटक थप खोपहरू बनिसकेपछि, ओहायोका प्रत्येक व्यक्तिले चाहेमा खोप लगाउने विकल्प हुनेछ।
NFP ले कहिले खोप पाउनेछ?
NFP ले जनवरी 20 मा Moderna खोपको सीमित आपूर्ति प्राप्त गर्नेछ।
Moderna खोप एक डोज वा दुई छ?
मोडर्ना भ्याक्सिन दुई डोजको खोप हो। यदि तपाईंले NFP मा Moderna खोपको आफ्नो पहिलो खुराक प्राप्त गर्नुभयो भने, हामी तपाईंलाई उपयुक्त समय सीमा भित्र दोस्रो खुराक प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नेछौं।
के यो खोप सुरक्षित छ?
सबै NFP प्रदायकहरूले यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी भएको विश्वास गर्छन्। यदि तपाइँसँग खोपको बारेमा विशेष प्रश्नहरू छन् भने, हामी तपाइँको लागि जोखिम र फाइदाहरू छलफल गर्न NFP प्रदायकसँग भर्चुअल अपोइन्टमेन्ट तय गर्न सक्छौं।
हामी NFP मा COVID-19 भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने सबै रोगीहरूको निगरानी गर्नेछौं ताकि कुनै पनि सम्भावित प्रतिक्रियाहरूलाई उचित रूपमा उपचार गरिन्छ। सौभाग्यवश, प्रतिक्रियाहरू धेरै दुर्लभ छन् - केही प्रति मिलियन खोपहरू।
मैले खोप लगाउनु पर्छ?
हामी सबैलाई विश्वास गर्छौं - विशेष गरी उच्च जोखिममा रहेकाहरूले - COVID-19 खोप प्राप्त गर्नुपर्छ।
यदि म गर्भवती/स्तनपान गरिरहेको छु भने के हुन्छ?
गर्भवती वा स्तनपान गराउनेहरूमा COVID-19 खोपको प्रभावसँग सम्बन्धित धेरै डेटा नभए पनि, हामी विश्वास गर्छौं कि विज्ञानले यो सुरक्षित छ भन्छ।
सुत्केरी र स्तनपान गराउने महिलाहरूले खोप लगाउने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा समन्वयात्मक निर्णय गर्न आफ्नो सुँडेनी वा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
NFP ले खोप कसरी वितरण गर्नेछ?
NFP ले हामीले प्राप्त गरेको खोपको डोजको वितरणको सम्बन्धमा स्वास्थ्य विभागको ओहायो निर्देशनहरू पालना गर्दैछ।
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता NFP बिरामीहरू र 75+ उमेरका समुदायका सदस्यहरू हुन्। हामीले खोपको थप खुराक प्राप्त गर्दा, हामी ODH दिशानिर्देशहरू पालना गर्दै अन्य बिरामीहरू र समुदायका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौं।
NFP ले खोप कहिले वितरण गर्नेछ?
हामी हाल ७५+ उमेरका NFP बिरामीहरूलाई COVID-19 भ्याक्सिनको पहिलो डोज प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूको अपोइन्टमेन्टहरू तय गर्न सम्पर्क गर्दैछौं। नियुक्तिहरू बिहीबार, जनवरी 21 मा सुरु हुनेछ।
NFP ले खोप कहाँ वितरण गर्नेछ?
सबै खोपहरू NFP Ridge सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (3569 Ridge Rd.) मा दिइनेछ।
के मैले NFP बाट खोप प्राप्त गर्न अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ?
हो। भ्याक्सिनहरू नियुक्तिद्वारा मात्र दिइनेछ। कुनै हिड्ने इन्स छैन।
मैले COVID-19 खोप पाउन सक्ने अन्य ठाउँहरू छन्?
हो। खोपहरू अस्पतालहरू, स्थानीय स्वास्थ्य विभागहरू, र केही फार्मेसीहरूमा पठाइनेछ जसले उनीहरूलाई पहिलो चरणमा चाहने योग्य व्यक्तिहरूलाई खोपहरू उपलब्ध गराउनेछ। एक पटक थप खोपहरू उपलब्ध भएपछि, त्यहाँ खोप प्राप्त गर्न थप स्थानहरू हुन सक्छ।
के हुन्छ यदि म NFP मा खोप लिन चाहन्छु?
NFP मा खोप प्राप्त गर्न प्रतिक्षा सूचीमा थपिन इच्छुक ६५+ वर्ष भएका व्यक्तिहरूले २१६.२३७.६१०० मा फोन गर्नुपर्छ। प्रतीक्षा सूचीमा थपिनुले व्यक्तिले NFP बाट खोप प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी गर्दैन।
यदि मैले NFP मा खोप लगाउने योजना बनाएको छु भने, के म मेरो पति/पत्नी/परिवारको सदस्यलाई पनि खोप लिनको लागि ल्याउन सक्छु?
होइन। खोपहरूको सीमित आपूर्तिको कारणले, खोपहरूको लागि निर्धारित अपोइन्टमेन्टहरू NFP द्वारा खोप प्राप्त गर्नको लागि सम्पर्क गरिएको एक व्यक्तिको लागि मात्र हो।
NFP मा खोप लिनको लागि मेरो निर्धारित अपोइन्टमेन्टको दिन म बिरामी छु भने के हुन्छ?
यदि तपाईंलाई ज्वरो वा अन्य प्रमुख रोगका लक्षणहरू (शरीर दुखाइ, फ्लू जस्तो लक्षणहरू) छैनन् भने, हामी तपाईंलाई आफ्नो भ्याक्सिन अपोइन्टमेन्टको लागि निर्धारित समय अनुसार आउन प्रोत्साहन गर्छौं।
NFP प्रदायकहरूले हाम्रो Ridge सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइपुगेपछि खोपको लागि आउने सबैलाई जाँच गर्नेछन्।
यदि तपाइँ खोपको दोस्रो खुराक प्राप्त गर्न निर्धारित मिति/समयमा बिरामी हुनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी त्यो भेटघाटलाई पुन: तालिका गर्नेछौं।
यदि मलाई अन्यत्र खोप लगाउने मौका दिइयो भने, के मैले यसलाई लिनु पर्छ?
हो। NFP ले अपोइन्टमेन्ट तय गर्नको लागि सम्पर्क गर्नु अघि नै तपाइँलाई अर्को खोप विकल्पको बारेमा सचेत गराइयो भने, हामी तपाइँलाई त्यो विकल्प लिन र तपाइँले त्यसो गर्नुभएको छ भनी हामीलाई फोन मार्फत सूचित गर्न प्रोत्साहन दिन्छौं।
के मैले खोप लगाउनु पर्छ?
होइन, COVID-19 खोप लिने वा नलिने यो तपाईंको छनौट हो। खोप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरू वरपरका सबैको स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ। खोप लिएर कोभिड-१९ को जोखिम कम गर्न सबैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। खोपहरूले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन्छ त्यसैले यो भाइरससँग लड्न तयार हुन्छ यदि तपाईं सम्पर्कमा आउनुभयो भने। COVID-19 खोप पाउनुका फाइदाहरूको बारेमा आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
यदि मसँग पहिले नै COVID-19 छ भने के मैले खोप लिन आवश्यक छ?
यो सिफारिस गरिन्छ कि COVID-19 का लागि सकारात्मक परीक्षण गरेका व्यक्तिहरूले अझै पनि खोप लिन्छन्। हामीले COVID-19 बाट संक्रमित हुँदा तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको उपचारको बारेमा प्रश्नहरू हुन सक्छ, तर हामी दृढतापूर्वक महसुस गर्छौं कि खोप पाएपछि सबैलाई फाइदा हुनेछ।
के मैले खोप पाएपछि मास्क लगाउनु पर्छ?
हो। तपाईंले खोप पाएपछि मास्क लगाउने र सामाजिक दूरीका नियमहरू पालना गरिरहनुपर्छ।